Kooxaha Juventus iyo Inter Milan oo qorsheynaya in Sánchez ay markale dib ugu celiyaan dalka Talyaaniga – Gool FM
Kooxaha Juventus iyo Inter Milan oo qorsheynaya in Sánchez ay markale dib ugu celiyaan dalka Talyaaniga
(Italy) 17 Maajo 2019. Shabakada “Sky Sports” ayaa xaqiijisay in kooxaha Juventus iyo Inter Milan ay si xoogan ugu dagaalamayaan saxiixa xiddiga reer Chile iyo kooxda Manchester United ee Alexis Sánchez.
30 jirkan reer Chile ayaa u dhaqaaqay Manchester United bishii Janaayo ee 2018, isagoo kaga soo biiray kooxda Arsenal, kaddib markii ay labada kooxood is dhaafsadeen xiddigaha Sánchez iyo Henrikh Mkhitaryan.
Laakiin Alexis Sánchez ayaa ku guuldareystay in kooxda Manchester United uu ku soo bandhigo qaab ciyaareed fiican xili ciyaareedkii hore iyo kan haatan, wuxuuna xilli ciyaareedkan dhaliyay kaliya 2 gool, isagoo caawiyay sidoo kale 4 gool, sidaasi darteed wuxuu u muuqdaa inuu ka dhaqaaqi doono garoonka Old Trafford xagaagan.
Shabakadda “Sky Sports” ayaa tilmaamtay in kooxaha Juventus iyo Inter Milan ay si aad ah u xiiseynayaan inay la soo wareegaan Alexis Sánchez, kaddib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo socda.
Shabakadan fadhigeedu yahay dalka Talyaaniga ayaa waxay sidoo kale sheegtay in wakiilka Sánchez uu la kulmay agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Fabio Paratici iyo sidoo kale kan Inter Milan ee Piero Ausilio, si ay ugu wada hadlaan arrinta Alexis Sánchez iyo suurtogalnimada uu ugu biiri karo mid ka mid ah labadan kooxood.
Waxaa xusid mudan in Alexis Sánchez.uu horey uga soo ciyaaray horyaalka Serie A , isagoo soo xirtay maaliyadda kooxda Udinese intii u dhaxeysay 2008 illaa 2011, ka hor inta uusan ku biirin Barcelona.
Wakiil: "Antoine Griezmann ma noqon doono bedelka Philippe Coutinho ee Barcelona"